Ndụmọdụ Jizọs Nyere Gbasara Ịkpata Ihe Ịsụ Ngọngọ na Ime Mmehie | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 18:6-20 MAK 9:38-50 LUK 9:49, 50
NDỤMỌDỤ GBASARA IME KA MMADỤ SỤỌ NGỌNGỌ
Ọ BỤRỤ NA NWANNA EMEE MMEHIE
Jizọs akụzierela ndị na-eso ụzọ ya otú ha kwesịrị isi na-ele onwe ha anya. Ha kwesịrị iwere onwe ha ka ụmụaka bụ́ ndị na-eweda onwe ha ala. Ha kwesịkwara ‘ịna-anabata ụmụntakịrị dị otú a n’aha Jizọs.’ Ọ bụrụ na ha ana-eme otú ahụ, ọ pụtara na ha ‘na-anabatakwa Jizọs.’—Matiu 18:5.
Ọ dịbeghị anya ndịozi Jizọs nọ na-arụrịta ụka gbasara onye kacha ukwuu n’etiti ha. N’ihi ya, ọ ga-abụ na ha weere ihe ahụ Jizọs gwara ha ka ịdọ aka ná ntị. Jọn onyeozi kwuliteziri ihe ọzọ mere n’oge na-adịbeghị anya. Ọ sịrị: “Onye Ozizi, anyị hụrụ otu nwoke nke ji aha gị na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, anyị gbalịkwara igbochi ya, n’ihi na ọ dịghị eso anyị.”—Luk 9:49.
O nwere ike ịbụ na Jọn weere ya na ọ bụ naanị ya na ndịozi ndị ọzọ ka e nyere ikike iji aha Jizọs agwọ ọrịa ma ọ bụ achụpụ ndị mmụọ ọjọọ. Ọ bụrụ otú ahụ, oleezi otú nwoke onye Juu ahụ si nwee ike iji aha Jizọs na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ? Ọ ga-abụ na Jọn chere na nwoke ahụ ekwesịghị iji aha Jizọs na-arụ ọrụ ebube ndị ahụ ebe ọ bụ na o soghị ha na Jizọs na-aga.
Ma, ihe Jizọs kwuru tụrụ Jọn n’anya. Jizọs sịrị: “Unu anwala igbochi ya, n’ihi na ọ dịghị onye ọ bụla nke ga-arụ ọrụ dị ike n’aha m nke ga-enwe ike ikwujọ m ọsọ ọsọ; n’ihi na onye na-adịghị emegide anyị dịnyeere anyị. N’ihi na onye ọ bụla nke kunyere unu otu iko mmiri ka unu ṅụọ n’ihi na unu bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst, n’ezie, ana m asị unu, ọ ga-anata ụgwọ ọrụ ya.”—Mak 9:39-41.
N’oge ahụ, ọ dịghị mkpa ka nwoke ahụ soro Kraịst na-aga tupu e were ya na ọ dịnyeere Kraịst. E hiwebeghị ọgbakọ Ndị Kraịst mgbe ahụ. N’ihi ya, na nwoke ahụ esoghị Jizọs na-aga apụtaghị na ọ na-emegide Jizọs ma ọ bụkwanụ na-akwado okpukpe ụgha. O doro anya na nwoke ahụ nwere okwukwe na Jizọs. Ihe Jizọs kwuziri gosiri na nwoke ahụ ga-enweta ụgwọ ọrụ.
Ma, ọ gaara ajọgbu onwe ya ma a si na ihe ndịozi Jizọs kwuru ma ọ bụ mee mere ka nwoke ahụ sụọ ngọngọ. Jizọs kwuru, sị: “Onye ọ bụla nke mere ka otu n’ime ndị a dị nta kwere ekwe sụọ ngọngọ, ọ ga-akara ya mma ma ọ bụrụ na e konye nkume igwe nri, dị ka nke ịnyịnya ibu na-akwagharị, n’olu ya wee tụba ya nnọọ n’ime oké osimiri.” (Mak 9:42) Ọ gwaziri ndị na-eso ụzọ ya ka ha gbupụ aka ha ma ọ bụ ụkwụ ha, ma ọ bụkwanụ ghụpụ anya ha ma ọ bụrụ na ihe ndị ahụ ga-eme ka ha sụọ ngọngọ. Ọ gwara ha na ọ ga-akara ha mma ma ha gbara aka ihe ndị ahụ banye n’Alaeze Chineke, kama ha ga-ejiri ha banye na Gehena (ya bụ, Ndagwurugwu Hinọm). Ndagwurugwu a dị nso na Jeruselem. Ọ bụ ebe a na-akpọ ihe ndị e kpofuru ekpofu ọkụ. Ọ ga-abụ na ndịozi Jizọs ma ya nke ọma. Ha ghọtakwara na Gehena Jizọs na-ekwu okwu ya pụtara mbibi ebighị ebi.
Jizọs dọkwara ha aka ná ntị, sị: “Hụnụ na unu eledaghị otu n’ime ndị a dị nta anya; n’ihi na ana m asị unu na ndị mmụọ ozi ha ndị nọ n’eluigwe na-ahụ ihu Nna m nke bi n’eluigwe mgbe niile.” Olee otú Nna Jizọs si were “ndị a dị nta”? Jizọs kọọrọ ha na e nwere otu nwoke nke nwere otu narị atụrụ, ma otu n’ime ha kpafuru. Nwoke ahụ hapụrụ iri itoolu na itoolu fọrọ afọ gaa chọwa nke ahụ kpafuru akpafu. Mgbe ọ chọtara ya, ọ ṅụrịrị ọṅụ n’ihi ya karịa otú ọ na-aṅụrị n’ihi iri itoolu na itoolu ahụ na-akpafughị. Jizọs gwaziri ha, sị: “Ọ dịghị Nna m nke bi n’eluigwe mma ka otu n’ime ndị a dị nta laa n’iyi.”—Matiu 18:10, 14.
Jizọs gwakwara ndịozi ya, sị: “Nweenụ nnu n’ime onwe unu, unu na ibe unu dị n’udo.” Ọ ga-abụ n’ihi ụka ahụ ndịozi ya nọ na-arụrịta gbasara onye ga-akacha ukwuu n’etiti ha mere o ji gwa ha ihe a. (Mak 9:50) Nnu na-eme ka nri dị ụtọ ma kwe oriri. Otú ahụkwa ka ọ dị ma a bịa n’okwu anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na anyị emee ka okwu anyị dị ụtọ, ndị ọzọ ga-enwe mmasị ịnabata ihe anyị kwuru, ya emeekwa ka udo dịrị. Ma, arụmụka anaghị eme ka udo dịrị.—Ndị Kọlọsi 4:6.
Ihe ọzọ Jizọs kwuru bụ ihe a ga-eme ma ọ bụrụ na okwu siri ike adapụta. Jizọs sịrị: “Ọ bụrụkwa na nwanna gị emehie, gaa mee ka ọ mara ebe o mejọrọ n’ebe naanị gị na ya nọ. Ọ bụrụ na o gee gị ntị, i ritela nwanna gị n’uru.” Ma, ọ bụrụkwanụ na o geghị gị ntị? Jizọs sịrị: “Kpọrọ otu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ ọzọ, ka e wee site n’ọnụ ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ mara na okwu ọ bụla bụ eziokwu.” Ọ bụrụkwa na o kweghị ka unu dozie esemokwu ahụ, kọọrọ ya “ọgbakọ,” ya bụ, ndị okenye ruru eru n’ọgbakọ. Ma, ọ bụrụkwanụ na e mechaa ihe ndị a niile ma onye ahụ ekweghị? “Ka ọ dịrị gị ka onye mba ọzọ na onye ọnaụtụ.” Ndị mba ọzọ na ndị ọnaụtụ bụ ndị ha na ndị Juu na-anaghị emekọrịta ihe.—Matiu 18:15-17.
Ndị okenye ọgbakọ kwesịrị ịna-eme ihe Okwu Chineke kwuru. Ọ bụrụ na ha achọpụta na mmadụ mere mmehie ma kpebie na a ga-adọ onye ahụ aka ná ntị, ihe ha kpebiri “bụ ihe e kere agbụ n’eluigwe.” Ma ọ bụrụ na ha ekpebie na aka onye ahụ dị ọcha, ihe ha kpebiri bụ “ihe a tọpụrụ n’eluigwe.” Ihe a Jizọs kwuru ga-aba uru ma e hiwe ọgbakọ Ndị Kraịst. Jizọs kwuziri ihe ga-eme mgbe a na-eleba anya n’ụdị okwu a. Ọ sịrị: “N’ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n’aha m, anọ m n’ebe ahụ n’etiti ha.”—Matiu 18:18-20.
Gịnị mere e kwesịghị iwere nwoke ahụ ji aha Jizọs na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ ka onye na-emegide Jizọs?
Olee ihe o ji bụrụ ihe jọgburu onwe ya ikwu ma ọ bụ ime ihe ga-eme ka onye dị nta sụọ ngọngọ, oleekwa ihe atụ Jizọs mere iji gosi na ndị a dị́ nta dị ezigbo mkpa?
Gịnị ka Jizọs kwuru a ga-eme ma ọ bụrụ na nwanna emee mmehie?